विदेशबाट शव आउने नवलपरासी पहिलो | Hulaki Online
विदेशबाट शव आउने नवलपरासी पहिलो
घडीमा दश बजेको थियो । फेसबुक खोल्दा बाबालाई अनलाइन देखे । बाबाको डियुटीमा जाने समय भएको थियो । लामो समय च्याट गर्न पाइन् ।‘राम्रोसँग बस्नु, आफ्नो ख्याल राख्नु’, बुबाले च्याटमा भन्नुभयो,‘मेलै त्यसको जवाफ लेख्न नभ्याउदै लगआउट गर्नुभयो’बर्दघाट नगरपालिका—११ विजयपुरका अमृत चौधरी(१७)ले अवरुद्ध गलामा भन्नुभयो, ‘त्यो नै बुबासँगको अन्तिम च्याट रहेछ’ ।
डेढ महिना अघि दिन अघि (२७ मंसिर) मा उहाँले बुबासँग फेसबुकमा च्याट गर्नुभएको थियो । त्यसको दुई घण्टा बित्न नपाउँदै उहाँका बुबा यमनारायणको(३५) मृत्यु भएको खबर आयो । दुई घण्टाअघि फेसबुकमा सञ्चै भेटेका बुबाको एक्कासी मृत्यु भएको खबर सुन्दा उहाँलाई पत्याउन गाह्रो भयो ।
यमनारायणको मृत्यु हुनासाथ कम्पनीले घरमा फोन गरेर जाकारी गरायो । कम्पनीका अनुसार टाउको दुखेको केहि समयपछि उहाँको मृत्यु भएको थियो । बुबाको मृत्यु खबर सुनेपछि उहाँको आमा र बहिनी सम्हालीन सकेनन् । अमृतलाई बुबासँग अन्तिम दिन फेसबुकमा गरेको च्याटको अहिले पनि झलझलि सम्झना आउँछ ।
जरनल वर्किन भिषामा मेलेसिया जानुभएका यमनारायणको कामको करार अवधि सकिन दुई महिना मात्र बाँकी थियो । तीन बर्षअघि मिलेनियम मेनपावरले उहाँलाई एक लाख ७० हजारमा मलेसिया पठाएको थियो । महिनामा ९ सय रिङगेट तलब सुविधा पाएका उहाँले चारजनाको परिवार सुःखसँग पाल्नु भएको थियो । दुई छोराछोरी बोडिङ्गमा पढेका छन् । फर्किएको दुई महिनापछि उहाँको घर बनाउने योजना थिए ।
श्रीमानको मृत्यु भएपछि सितालाई छोराछोरी पढाउने र घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोली रहेको छ । ‘चार महिनाअघि उहाँ पछिल्लो पटक घरमा आउनु भएको थियो ।युरेटरमा पत्थरी परेपछि उपचारकालागि दुई महिनाको विदा लिएर घरमा आउनु भएको उपचारपछि निको भएर फेरी मेलिसिया फर्किनुभयो ।’सिताले गहँभरी आँसु लिदैं भन्नुभयो ।
उहाँ विगत सम्झिदै भन्नुहुन्छ,‘दुई महिनापछि घर आउछु भन्नुभएको थियो,शव आइपुग्यो’। श्रीमानको मृत्युको घटना सम्झिदा मन पोल्ने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । विदेश नगएको भए त्यस्तो घटना घट्थेन होला उहाँको अनुमान छ ।
सिताको जस्तै अनुमान यमनारायणका दाजु शम्भुनारायणको पनि छ । आठ वर्षअघि दाई काम सन्तनपुर कम्पनीमा ट्रान्सपोटेसनको काम गर्दै आएका दाजु शम्भुनारायण एक वर्षदेखि घरमै बस्नु भएको छ । पासपोर्टको म्याद सकिएर घर फर्किनु भएका शम्भुनारायण केही समयपछि सोहि कम्पनी काम गर्न जाने योजना बनाउनु भएको थियो ।
मलेसिया जाने वित्तिकै यमनारायणले दाजुले काम गरेकै कम्पनीमा काम पाउनु भएको थियो । यमनारायणले घटना हुनुभन्दा चार दिनअघि दाजुलाई फोन गरेर सोही कम्पनीमा काम गर्न बोलाउनु भएको थियो ।
नयाँ पासपोर्ट बनाएर भाइले काम गरेको कम्पनी जाने योजना बनाएका शम्भुनारायण भन्नुहुन्छ्,‘भाईको मृत्यु भएपछि विदेश जाने योजना त्यागे, घरमै बसेर व्यवसाय गर्ने साेंच बनाएको छु’ ।
यमनारायण विदेश जानुअघि फर्निचरमा काठ पेन्टरको काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको मासिक तलब २० हजार थियो । विदेश गए अझ धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर उहाँ मलेसिया हानिनु भएको हो ।
माथिको यो घटना त एउटा उदाहारण मात्रै हो । परिवारलाई सुखसंग पाल्ने सपना बोकर बदैशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको सपना पूरा नहुँदै शवसँगै सबै सपनाप बाक्सामा बन्द भएर आउने गरेको छ । अर्को तिर वैदेशिक रोजगार पारिवारिक विखण्डन र अपराधको स्रोत बन्दै गएको छ तर,पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्यामा कमि आउन सकेको छैन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको बि.स २०५० देखि २०७३ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार जम्मा ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५६ वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । जसमा खाडी मुलुक र मलेसियामा जाने नेपाली युवाको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा रहेको छ । जुन संख्या संस्थागत रुपमा जानेको मात्र हो ।
यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा अधिकांश युवा खाडी मुलुकमा गएका छन् । मलेसिया जाने युवाको संख्या अहिले तुलनात्मक हिसाबले कम रहेको छ । रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेसंग रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएर आउने शवको संख्या पनि घट्न सकेको छैन् ।
नवलपरासीमा मलेसिया र खाडीमुलुकमा गएका नेपाली कामदारको ३२ महिनाको अवधिमा सय ओटा शव आइपुगेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामि) सूचना तथा परामर्श केन्द्र परासीकी संयोजक उमा पौडेलले बताउनुभयो । धेरै तापक्रममा लगातार काम गर्नु, आराम नगर्नु , खानपिनमा ध्यान नदिनु, काम गर्न नजान्नु, नसक्नु ,परिवारले मानसिक तनाव दिनु ,दुर्घटना हुनु र सुरक्षा नहुँदा विदेशमा युवाहरुको मृत्यु हुने गरेको संयोजक पौडेलको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार मध्ये देश भरिमै शव आउने जिल्ला मध्ये धनुषा पहिलो भएपनि पछिल्लो डेढ बर्षको अवधिमा नवलपरासीमा सबै भन्दाबढी शव आउने प्रवासी नेपाली समन्वय समिति(पिएनसिसि)का कार्यक्रम संयोजक संजय चौधरी भन्नुहुन्छ,‘शव आउने मध्ये नवलपरासी पहिलो स्थानामा छ’ ।चौधरीका अनुसार डेढ बर्षको अवधिमा नवलपरासीमा ४२ वटा शव आएको छ ।
कसरी हुन्छ मृत्यु ?
खाडी मुलुक र मलेसिया जाने धेरै नेपाली कामदारको उमेर १८ देखि ४० बर्ष रहेको छ । ४५ देखि ५० डिग्रि सेन्टिग्रेट तपक्रममा काम गरेर फर्किन साथ एसिमा गएर सुत्ने गर्दा शरिर र कोठाको तापक्रमको सन्तुलन नमिल्दा मृत्यु हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ मरुभूमीमा शरिरले थेग्नै नसक्ने गरि लगातार काम गर्नु, काम गर्न नसक्नु , खानपिनमा ध्यान नदिदा र अत्याधिक मदिरा सेवन गर्दा पनि धेरैको मृत्यु हुनेको गरेको छ । यस्तो मृत्युलाई प्रकृतिक कारणले हुने मृत्यु भनिएको छ । यी देशहरुमा ७० देखि ८५ प्रतिशत कामदारहरु रातिको सुतेको अवस्थामा मृत भेटिने गरेको प्रवासि नेपाली समन्व समिति(पियनसिसि)का कार्यक्रम संयोजक चौधरी बताउँनुहुन्छ । हृदयघात,काम गर्ने सीप र सवारी दुर्घटना सम्बन्धि जानकारी नहुँदा पनि धेरै नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको उहाँले सुनाउनुभयो ।आत्महत्या र हत्याका कारण पनि नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको छ । चौधरीका अनुसार प्राकृतिक कारणले मृत्यु हुनेको संख्या अत्याधिक रहेको छ । त्यसपछि ट्राफिक र कार्यक्षेत्र दुर्घटना रहेको छ । मृत्युका घटना सउदी अरबमा सबैभन्दाबढी रहेको, त्यसपछि मलेसिया र कतार रहेको छ ।
शव किन ढिलो आउछ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको विदेशमै मृत्यु हुँदा नेपालमा शव ल्यान समस्या हुने गरेको छ । धेरै नेपाली कामदार घरमा कागजपत्र छाडेर जादैन् । कागजपत्र छाडेर गएका,कागजात पुरा भएको र प्रकृया मिलेका कामदारको शव ल्याउन समस्या नपर्ने भएपनि घरमा कागजात नछाडेको, कागजात पुरा नभएको र करार अवधि सकिएको र काम गर्ने कम्पनी छाडेर अन्यत्र गएका कामदारको मृत्यु भएका शव ल्याउन समय लाग्ने गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना(सामि)का सूचना तथा परामर्श केन्द्र परासीका कार्यक्रम अधिकृत ज्ञनेश्वर भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ,‘परिवारसँग सम्पर्कबिहन भएका कामदारको मृत्यु भएमा शव नआउन पनि सक्छ,’।मेलेसिया,दुवई,कतार लगाएका स्थानमा कागजपत्र मिलेकोको अवस्थामा तीन दिन देखि एक हप्तामा शव आउने भएपनि कागजात नमिलेको अवस्थामा तीन समय लाग्ने गरेको भण्डारी बताउँनुहुन्छ । साउदी अरब र कुंवेदमा अन्य देशको तुलनामा शव झिकाउन तुलानात्मक रुपमा समयबढी लाग्ने गरेको छ ।त्यहाको कानुनी प्रकृया झण्झटिलो भएकाले ।शव ल्याउनका लागि कम्तीमा पनि तीन महिना सयम लाग्ने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रर्वधन बोडले नेपाली विमानस्थलमा आइपुगेको नेपाली कामदारको शवलाई घर सम्म निःशुल्क पु¥याउने व्यवस्था गरेकोे छ ।
क्षतिपूर्ती कसरी पाउछन् ?
वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको श्रम अवधि भित्र मृत्यु भएमा वैदशीक रोजगार प्रर्वधन बोडले तीन लाख क्षतिपूर्ती दिने गरेको छ । त्यसका लागि श्रम सम्झौता, विमा, पासपोट, भिसा, मृत्यु प्रमाणित गरेको कागज पत्र, प्रहरी रिर्पोट र दुतावासको पाँच चरी कागजपत्र आवश्यक पर्छ । प्रर्वधन बोडबाट तीन लाख , विमा कम्पनीबाट ५ लाख क्षतिपुर्ती पाउने प्रावधान छ । ०७३ बैशाखदेखि विमाको रकम बढाएर १० लाख बनाइएको छ । बैशाखमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारले विमा कम्पनी बाट मात्रै १० लाख रुपैयाँ क्षतिपुती पाउने छन् । विमा कम्पनी र मेनवार कम्पनी राम्रो परेको अवस्थामा ६० हजार किरिया खर्च समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । श्रम अवधि भित्र नेपाली कामदारको मृत्यु भएको र सबै कागजात मिलेको अवस्थामा एउटाले ११ लाख १५ लाख सम्म क्षतिपुर्ती पाउने गरेका छन् । काम गर्ने कम्पनीले जीवन विमा र स्वाथ्य विमा गरिदिएको अवस्थामा डीयुटी टाईमा मृत्यु भएमा पनि मृतकले क्षतिपुर्ती पाउने गर्छन् । कम्पनी पनि क्षतिपूर्ती दिएको अवस्थामा एउटा मृतक परिवारले २५ लाखसम्म क्षतिपुर्ती पाएको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो । कार्यक्रम संयोजक पौडेलका अनुसार सन् २०१३ नोभेम्बर २०१६ सम्म सूचना केन्द्रमा क्षतिपुर्तीको प्रकृयाकालागि आएका ८० जनाको परिवारले ५ करोड क्षतिपूर्ती पाएका छन् ।परासी पत्रबाट